Hafatry ny Fivondronamben’ny eveka eto Madagasikara – novambra 2019 – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
“Nino izy, fa nanantena na dia tsy nisy tokony hanantenany aza” (Romana 4, 18)
1. Fiarovana ny Tontolo iainana
Hoy ny Papa tamin’ireo pretra sy olom-boatokana :“Famantarana ny fandresenareo rehefa mirotsaka mamboly hazo ianareo, na manampy amin’ny fanomezana rano fisotro madio ny fianakaviana”. Nohamafisiny koa izany tamin’ireo Olom-pirenena teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha : “tsy hisy ny tena fijery ekolôjika marina na asa mivaingana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana raha tsy ampidirina ao ny rariny sy hitsiny ara-tsosialy izay manome ny zo amin’ny fampiasàna iombonana ny haren’ny tany amin’ny taranaka ankehitriny sy amin’ireo taranaka any aoriana”.
2. Fiarovana ny tontolon’ny « aina » sy ny zon’olombelona
Ny trano fonenana tsizarizary, trano bongo no isisihan’ny mpianakavy any ambanivohitra. Tsy ampy sakafo sy rano fisotro madio ny toerana maro samihafa. Ireo zokiolona tsy voakarakara araka ny tokony ho izy, tsy voaray ara-potoana ny fisotroan-dronono. Mahazo vahana ny fahantran’ny madinika tsy manan-katao. Nahoana no tsy mety ho fongotra ity kolikoly ity, izay efa dradradraina hatramin’ny ela ny ady atao aminy? Tsy matahotra an’Andriamanitra intsony ireo mpiasa any amin’ny fitsarana (justice), ny fananan-tany (domaine), ny habantseranana (douane), ary ny any amin’ny tobim-pahasalamana… Ho faty tokoa ny « fanahy maha-olona » raha izao no mitohy. Mitondra amin’ny fahafatesana ireo fahasimbana ireo fa tsy mitondra velively amin’ny fiadanana andrandraina .
3. Fiarovana ny tontolom-pinoana kristianina
Mbola maro ireo misalasala tsy miraikim-po tanteraka amin’ny finoana maha-Kristianina. Tsy sahy mirotsaka mandray andraikitra. Misy ny midi-droa, sady kristianina no manompo sampy. Mivadi-belirano amin’ny toky nomena tamin’ny batemy. Ny fahantrana koa anefa manampy trotraka etsy andaniny : maro ireo lehilahy sy vehivavy, tanora, zaza, mijaly ary tena tsy manana n’inona n’inona ! Maro amin’ny Malagasy no miaina toe-javatra sarotra, tsy ampy amin’ny ilaina andavanandro: sakafo, rano, trano fonenana, herinaratra, làlana, fitsaboana, fianarana, fitaovam-pifandraisana…. Maro no mizaka eo an-tsorony ny vesatry ny politika tsy ahitam-boka-tsoa . Raha adika dia hoe : mafy loatra angamba ny adim-mpiainana ka hadino ny mivavaka, hadino ilay Nahary.
Antso avo nataon’ny Papa teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha ny hoe :“tokony halain-tahaka ny fihetsiky ny mpiray tanindrazana aminareo amin’ny fahaizany mifanakalo hevitra, tsy iza fa ny Olontsambatra Victoire Rasoamanarivo… Ny fijoroany ho vavolombelon’ny fitiavany ny tanindrazany sy ny lovam-panahy ao aminy, ny fanampiana an’ireo faraidiny izay famantarana ny finoana an’i Jesoa Kristy no manondro antsika ilay làlana izay iantsoana antsika ihany koa mba halehantsika”.
Ho antsika mpitondra ny Vahoakan’Andriamanitra tsy ankanavaka dia ny Eveka, ny pretra ary ireo olom-boatokana : mampirisika antsika ny Papa mba ho eo akaikin’ny vahoaka mandrakariva isika, hijoro ho vavolombelona mahatoky ary “tsy hanao ny fiantsoan’Andriamanitra antsika ho tohatra fiakarana ho amin’ny “fiainana tsaratsara kokoa”! “Fanamby iarahantsika manatanteraka ny ho « Eglizy mivoaka ». Aoka ho sahy mivoaka ianareo, hitondra ny hazavan’ny Evanjely amin’ireo faritra samihafan’ity Nosy ity. Sambatra ianareo, Eglizy sambatry ny mahantra sy ho an’ny mahantra, satria velona vonton’ny hanitry Tompo izy, faly eo am-pitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ireo izay voailiky ny tany, amin’ireo izay nosafidìn’ Andriamanitra”.